Ndị na-emepụta Beta-Lactoglobulin (9045-23-2) - Chemical Chemical Phcoker
β-Lactoglobulin bụ protein whey bụ isi nke mmiri ara ehi na atụrụ (~ 3 g / l), ma dịkwa n'ọtụtụ anụmanụ ndị ọzọ …….
Beta-Lactoglobulin (9045-23-2) vidiyo
Beta-Lactoglobulin (9045-23-2) Smmezi
Product Name Beta-Lactoglobulin
Chemical Aha β-Lactoglobulin (LG); BLG; -Lg
molekụla Wasatọ 18,300
Sume H2O: 10 mg / mL
Antinye -Lactoglobulin A ejirila mmiri ara ehi bovine:
• dị ka calibrant maka mmezi nke ngwaọrụ TriWave
• dị ka ọkọlọtọ n'ime nchọpụta na ịchọpụta nke β-lactoglobulin na mmiri ara ehi site na ntụgharị chromatography nke dị elu (HPLC).
• na nhicha na ịdị nha ịba ọcha n'anya nke nlele
Ejiri β-Lactoglobulin mee ihe na njirimara nke mkpụrụ ndụ ihe nketa nke κ-casein na mmiri ara site na elektrikresro elektrik.
Beta-Lactoglobulin (9045-23-2) Isi nyocha
β-Lactoglobulin bụ protein whey bụ isi nke mmiri ara ehi na nke atụrụ (~ 3 g / l), ma dịkwa n'ọtụtụ ụdị anụmanụ ndị ọzọ; otu ihe puru iche bu mmadu. Ihe dị ka 20% nke protein nke mmiri ara ehi bovine bụ ndị na-edozi whey, ihe bụ isi bụ beta-lactoglobulin. β-Lactoglobulin na-abụkarị ihe bụ isi na whey dabeere na ntụ ntụ protein.
Ihe nchebe Whey nwere ike ịbụ ihe nfụkasị nri. Mmiri ara ehi Bovine bụ otu n'ime ihe nri nri kachasị mkpa, ọ bụ maka ụmụaka. N'ihi ya, ịdebere beta-lactoglobulin ma ọ bụ mmiri ara ehi bụ ihe iwu dị na ọtụtụ mba. Agbanyeghị na enweghị usoro iwu dị maka protein whey, a na-atụkarị aro ka ndị na-emepụta nri nwalee nnwale dị obere iji chekwaa ndị nwere nsogbu ahụ ma zere icheta nsogbu metụtara ahụ.
Gịnị bụ Beta-Lactoglobulin ?
Beta-Lactoglobulin (ß-lactoglobulin, BLG) bụ isi protein protein whey na mmiri ara ehi ma na-anọkwa na mmiri ara ehi nke anụmanụ ndị ọzọ. Ihe dị ka 20% nke protein ara mmiri bovine bụ protein whey, ebe akụkụ bụ isi bụ beta-lactoglobulin. Beta-Lactoglobulin na-abụkarị ihe kachasị mkpa na ntụ ntụ protein protein.
Beta-lactoglobulin bụ protein zuru ụwa ọnụ nke ezinụlọ lipocalin. O nwere ihe omimi 18,300 ma mejuputa 162 amino acid, tinyere oke onu ogugu nke amino acid (BCAAs).
Beta-lactoglobulin (b-lactoglobulin / BLG) bụ otu n'ime ihe ndị kachasị egbu ara nke mmiri ara ehi. Ọ bụ otu n’ime protein ndị a na-ahụkarị n’ime mmiri ara ehi na-akpata mmeghachi omume nfụkasị, n’agbanyeghi na ọtụtụ ndị n’onwe ha na-enwekarị nfụkasị ihe karịrị otu protein mmiri ara ehi. BLG bụ protein kachasị ukwuu na whey, na-aza pasent 50 nke ngụkọta protein n'ime mkpo lactoserum na ihe dị ka pasent 10 nke mmiri ara ehi.
Na mkpokọta, globulins bụ obere protein ndi na-ekekọta na oge okirikiri, lactoglobulins bụ globulins nọ na mmiri ara ehi. Mgbe a na-eji mmiri ara ehi adọpụta ahịhịa (dịka ọmụmaatụ, site na rennet ma ọ bụ acidity), lactoglobulins na-anọ n'azụ whey (yana lactalbumin, lactose, mineral, na immunoglobulins). Ndi na edozi ihe dika 10% nke solids nke whey, na beta-lactoglobulin di ihe dika 65% nke 10% ah.
Alfa-lactoglobulin so na njikọ lactose. Ebumnuche nke beta-lactoglobulin edoghị anya, na agbanyeghị na ọ nwere ike ekekọta ọtụtụ ụmụ irighiri mmiri hydrophobic, ebumnuche bụ isi nwere ike ịbụ naanị ka ọ bụrụ isi iyi amino acid. Egosiputawo Beta-lactoglobulin ka enwere ike kegide ígwè site na akuku uzo ma yabụ nwere ike ikere aka na ịlụso nje ọgụ.
Na-eche eziokwu ahụ bụ na protein Whey bụ ngwakọta nke beta-lactoglobulin, alpha lactalbumin, bovine serum albumin, na immunoglobins. Ndị mmadụ na-ejikarị whey eme ihe dị ka mgbakwunye, tinyere mmega ahụ na-eguzogide, iji nyere aka melite njikọ protein ahụ ma kwalite uto nke ahụ ike.
Uru ndị dị na ya gụnyere ịbelata oke ibu, Njirimara Ọrịa kansa, belata cholesterol, Asthma, Ọbara ọbara na ọrịa obi, Mbelata oke ibu na ndị bu nje HIV.
N'adịghị ka protein whey nke ọzọ, α-lactalbumin, ọ nweghị ọrụ doro anya achọpụtara maka β-lactoglobulin, nke a n'agbanyeghị na ọ bụ akụkụ kachasị akụkụ nke ihe mejupụtara akụkụ nke protein ndị ụwa na-anọpụ na whey (β-lactoglobulin ≈⁠ ⁠65%, α-lactalbumin ≈⁠⁠ ⁠ 25%, serum albumin ≈⁠⁠ ⁠8%, ndị ọzọ ≈⁠ ⁠2%). β-lactoglobulin bụ protein lipocalin, ọ nwere ike jikọta ọtụtụ mkpụrụ ndụ hydrophobic, na-atụ aro ọrụ dị na njem ha. E gosipụtakwala β-lactoglobulin na-enwe ike ikechi igwe site na akuku akuku ma ya nwere ike inwe oke aka na mbuso oria ojoo. Mmekorita nke β-lactoglobulin enweghi mmiri ara ara mmadu.
Beta-Lactoglobulin (BLG) bụ protein kasị ukwuu whey na mmiri ara ehi. A gụrụ LG n’ọrụ banyere nri maka nsị nri ya na arụ ọrụ ya na usoro ndu dị iche iche.
Tụkwasị na nke a, BLG nwere ike ịbụ ihe na-edozi antioxidant dị ọnụ ala nke na-adị mfe ma dị mfe ịnweta. BLG nwere ike ịme ihe dị ka ihe na-edozi ahụ nke na-adị mfe ịnweta ma dịkwa ọnụ ala na ndụ kwa ụbọchị. Akụkọ anyị gara aga gosiri na free cysteine ​​nke BLG na-arụ ọrụ nchekwa na ọdịdị mmiri ara ehi nke mmiri ara ehi. BLG bụ ọrụ maka 50% nke mmiri ara ehi na-arụ ọrụ antioxidant. Ọ bụghị naanị na BLG nwere ike ịrụ ọrụ dị ka ihe na-edozi ahụ, ọ nwekwara ike iburu antioxidants ndị ọzọ site na akpa njikọ ya. N'ihi ya, ọ na - abawanye ma bioavailability na ego nke antioxidants dịnụ.
β-Lactoglobulin bụ protein kachasị whey n'ime mmiri ara bovine na-aza ihe dịka 50% nke protein n'ime whey mana ahụghị n'ime mmiri ara ehi. β-Lactoglobulin nwere ụdị ọrụ dị iche iche na arụ ọrụ nri mere ka protein a bụrụ ihe bara ụba maka ọtụtụ nri na ngwa kemịkalị.
Mmetụta dị n'akụkụ Beta-Lactoglobulin
Ọrịa nke mmeghachi omume nfụkasị na beta-lactoglobulin nwere ike ịbụ:
Ọcha na-acha ọbara ọbara ma ọ bụ hives
Nsogbu na-akpata nsogbu
Beta-Lactoglobulin ntụ ntụ ojiji
β-Lactoglobulin na-ebute ọkụ ọkụ na-ebu dị ka ndị na-ebu polyunsaturated abụba abụba. Perez AA, Andermatten RB, Rubiolo AC, Santiago LG Chem nri. 2014 Sep 1; 158 (): 66-72.
Nhazi na ihe nfụkasị ahụ nke bovine β-lactoglobulin mesoro sonication-enyere irradiation aka. Yang F, Zou L, Wu Y, Wu Z, Yang A, Chen H, Li X. J Mmiri Sci. 2020 Feb 26
Nnyocha nke Genomic nke Milk Amalite Nri na Brown Swiss Cattle. Macedo Mota LF, Pegolo S, Bisutti V, Bittante G, Cecchinato A. Animals (Basel). 2020 Feb 2